Telefeyshinka Sacuudi Careebiya oo taariikhda markii ugu horeysay ay gabar weriye ah ka dhex muuqatay.
Weeraradii lama filaanka ahaa ee ka dhacay dalka Mareykanka 11 septermber ee 2001-da,waxaan shaki ku jirin in isbadal weyni ay dunida gashay, kadib markii maalintaasi noqotay maalin abuurtay in dagaal toos ah lala galo waxa loogu yeeray Argagaxisada. Hase ahaatee la filimenyn in isbadalkii dhacay maalintaa kadib ay saameyn weyn ku yeelan doonto meelo badan oo caalamka kamid ah.
Hadaba telefeyshinka dalka Sacuudiga careebiya oo markiisii hore looga bartay iney badi ka howl galiaan ragg oo keliya ayaa shalay oo axad ah waxaa markii ugu horeysay taariikhda telefeyshinka dalkaasi ka muuqatay gabar weriye ah oo magaceedii lugu sheegay Xusna. Gabadhan weriyaha ah ayey fajaciso ku noqotay in gabar u dhalatay dalkaasi ay isa soo taagto telefeyshin adduunyadoo dhan laga fiirsanaya.
Kanaal cusub oo loogu magacdaray "Al akhbaariyah" (Warka) ayey isa soo taagay gabadhaasi weriyaha oo wejigeedii ka muuqday xamaasad ku dheehan xirnaashaha ay haweenka sucuudiga ka xirnaayeen saxaafada gaar ahaan telefeyshinada oo iminka waa cusub u baryey.
Barnaamijyada telefeyshinka Al-akhbaariyah oo ka kooban warar,wareysiyo, dhaqaalaha iwm ayaa ku bilowday mid laagaga hadlaayey guud ahaantii booqashadii uu ku yimid dalka Sacuudiga boqorka Jordan oo haatan booqasho rasmi ah ku joogo halkaas.
Markaa kadib ayaa gabadhii weriyaha aheyd waxaa intii ay ku jirtay akhrinta warka u wareejisay daawadayasheedii weriyayaashooda ku sugan dalalka Ciraaq iyo Israa'iil oo si toos ah ugu jiray muraayda la iska arko halkaasi ay kasoo gudbinayey dhacdooyinka ka dhaca Dhulalkaasi carbeed ee la heysto.
Dhanka kale weriyeyaasha ka howlgeli doona ayaa ilaa iyo hada inta la ogyahay ka koobnaan doonaan afar haween ah kuwaasoo joogto u akhrin doona wararka iyo dhalinyaro kale oo la sheegay iney tababaro ay siineyso dhigooda kale ee telefeyshinka Al-Carabiya oo fadhigeedu yahay magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Talaabadan ay qaadeen mas'uulinta dalka Sacuudiga ayaa loo arkaa iney tahay mid aad soo dhaweynayaan dalalka reer galbeedka gaar ahaan maamulka Bush oo marar badan ku cel celiyey in gobolka bariga dhexe laga abuuri doono waxa uu ugu yeeray "
dimoqraadiyad" dagaalka Ciraaq kadib, taasoo iminkaba dadka indho indheeya siyaasada bariga dhaxe ay sheegayaan in dalka Sacuudiga uu yahay meelaha ugu horeysa ee Mareykanku doonayo iney isbadalo ka sameeyaan.
Dalalka ku yaala gobolka gacanka Carabta ayaa waaydanba waxaa u dhaxeeyey dagaal xagga warfaafinta ah oo ku saleysan siddii loo kala helilaaa kalsoonida daawadayaasha carbeed
ayaa la runsan yahay telefeyshinka Al-Carabiya oo ah mid ay maal geliyaan dalka Sacuudiga ujeeda loo sameeyey ay tahay siddii ay uga guuleysan lahaayeen baratanka kala dhaxeeyya telefeyshinka loogu daawashada badan yahay dunida carabta iyo islaamkaba ee Aljazeera oo waaydan danbe u muuqda inuu yahay CNN-tii dunida carabta.
Isku soo wada duuboo isbadalka xagga saxaafadeed ee iminka ka curtay dalka Sacuudiga ayaa ah mid wax kabadaleysa caburintii saxaafada Sacuudiga lugu hayey gaar ahaan dumarka oo aan loo ogolaan jirin iney wejiyadooda ka muuqdaan muraayda la iska arko. Balse taasi macnaheeda ma ahan in qeybihii kale ee dumarka Sacuudiga cadaadiska xagga dhaqanka iyo diinta ku jiray ay ka baxday, balse
waase bilowga qarshaha uu Mareykanka la damacsan yahay dalkaasi.